Semalt: Chii chiri Page Links Scraping Tool. 3 Zvikamu Zvisiyanana zveIpa Online Scraper
Peji Chigadziro Chishandiso chinoshandisa mazano eIndaneti ewebsite uye zvinyorwa zvinowanikwa pamapeji akasiyana ewebhu. Kana imwe nyaya ichinyatsogadziriswa, inoratidzira hukama muhuwandu hwemashoko uye inoita kuti basa redu rive nyore. Izvi online scraper hazvisi zvakanaka chete kuhutano hwemukati asiwo zvinoratidzira hutano hwekunze uye hunochinja dhidhi kuti ive inooneka. Kurasikirwa kwemasangano ndiyo nzira iri nyore yekuwana mapurogiramu akasiyana, mawebsite, uye web-based technologies. Chinangwa cheZvi Links Scraping Tool ndechekuchera ruzivo kubva kune dzimwe nzvimbo - curso de fotografia en san juan. Iyo yakavakwa nemhando yakakwana uye yakananga yekuraira mutsara inonzi Lynx uye inowirirana nezvose zvinoshanda. Lynx inonyanya kushandiswa kuedza uye kutambudza mapeji ewebhu kubva mumutsetse wemirairo. Peji inosangana neshungu ndiyo chigadzirwa chakanaka chakatanga kuumbwa muna 1992. Inoshandisa mitambo yeIndaneti inosanganisira WAIS, Gopher, HTTP, FTP, NNTP, uye HTTPS kuitira kuti basa rako riite.
Nhatu nhatu huru dzechigadziro:
1. Dhipe Data mu Multiple Threads:
Kushandisa peji peji kugadzira chigadzi , unogona kupora kana kubvisa deta mumatafura akawanda. Zvipfeko zvekare zvinotora maawa kuti zviite mabasa avo, asi chigadzirwa ichi chinoshandisa tsvina dzakawanda kuti dzishandure mapeji makumi mapfumbamwe ewebhu panguva imwe chete uye isingashatisi nguva yako nesimba.
2. Bvisa Data kubva kune Dynamic Websites:
Dzimwe nzvimbo dzinoshandisa dzinoshandisa dhigiriji maitiro ekugadzira kuita zvikumbiro zvakadai seAJAX. Nokudaro, zvakaoma kune anowanzo web scraper kubvisa deta kubva kune iyo nzvimbo. Peji Yechirongwa Chekugadzira Chirongwa, zvisinei, ine zvinhu zvine simba uye inogonesa vashandisi kukohwa dhenda kubva kumadziro ekutanga uye echinyakare zviri nyore. Uyezve, chigadziri ichi chinogona kubvisa ruzivo kubva kune zvigadzirwa zvemasangano evanhu uye ine mabasa akachenjera kuti urege kutadza 303.
3. Tumira Mashoko kune Chero Fomu:
Peji Yechikwata Chekushandisa Chirairo chinotsigira maitiro akasiyana uye zvinyorwa zvekutumira kunze nenzira yeMySQL, HTML, XML, Access, CSV, uye JSON. Iwe unogonawo kukopa uye kuisa zvikamu muShoko reShoko kana kutsvaga zvakananga mahwindo akabudiswa ku-hard drive yako. Kana iwe uchigadzirisa zvirongwa zvayo, peji inobatanidza zvigadzirwa zvekutsvaga zvichange zvitsvaga deta yako pa disk yako yakangoerekana yakarongeka mumutauro wakagara wataurwa. Iwe unogona kushandisa deta iyi zvisina kufanira uye unogona kuvandudza nzvimbo yako yekushanda kusvika pane imwe.
Nzira yekushandisa sei iri shanduro?
Unongotanga kupinda URL uye bvumira ichi chiya kuita basa rayo. Inotanga kuongorora iyo HTML uye ichakubudisa deta yako kubva pane zvaunenge wataura uye zvinoda. Zvigumisiro zvinowanzoratidzwa mumhando yeurongwa. Kana kambani yacho yakanyatsogadziriswa zvakakwana, chiratidzo chinoratidzwa kune rumwe rutivi rworuboshwe. Kana ukagamuchira shoko rokuti "No Links Found" zvingadaro nokuti URL yawakapinda yakanga isiri iyo. Iva nechokwadi chekuti wakapinda URL chaiyo kuti ubvise mairi kubva. Kana iwe usingakwanisi kubvisa zvisungo pamunhu, imwe sarudzo ndeyokushandisa API. I API inoshandiswa mumutambo wekutengesa uye inotungamirira mazana emibvunzo panguva yevashandisi.